PASSION WAGS. Amiens-PSG: Fantaro ireo vehivavy mpilalao amin'ny ekipa roa ao amin'ny sary - TELES RELAY
HOME » OLONA SY FAHAFAHANA »PASSION WAGS. Amiens-PSG: Fantaro ireo vehivavy mpilalao amin'ny ekipa roa amin'ny sary
PASSION WAGS. Amiens-PSG: Fantaro ireo vehivavy mpilalao amin'ny ekipa roa amin'ny sary
Taorian'ny fiatombohan'ny ririnina sy ny lalao baolina kitra anankiroa, Paris Saint-Germain, mpitarika matanjaka ny sokajy, dia milalao indray ao amin'ny ligy ary mihetsika any Amiens ny sabotsy 12 Janoary tamin'ny lanonana tamin'ny andro 20e Lig 1. Amin'ity fotoana ity, Closer dia manasa anao hahita ireo zatovovavy izay mizara ny fiainan'ireo mpilalao ao an-drenivohitra sy ny an'ny Amiens. Taorian'ny nandondona tao amin'ny Fiadiana ny Amboara eran-tany tamin'ny faran'ny fifaninanana, mila fanohanana ireo Parisiana ny vadiny sy ireo mpiara-mitory aminy talohan'ity fitsangatsanganana kely ity ho any Picardy.
Ireo kintana roa an'ny ekipa, Neymar et Mbappé, manomboha ny taona 2019 singa. Hahafantatra azy ireo hatramin'ny volana Desambra ve izy ireo? Miverina any amin'ny tranom-piaramanidin'i Paris, lItaliana Gianluigi Buffon dia hidera ny brunette tsara tarehy Ilaria d'Amico, ny renin'ny zandriny indrindra. Ny mpiara-mitory Marco Verratti, Laura Zazarra, dia hanara-maso akaiky ny fitondrantenan'ny malalany. Ny Dani Alves Breziliana, izay miala amin'ny fahavoazana maharitra, dia tsy isalasalana fa hahazo hafatra fanohanana avy amin'ny namany, ilay modely Joana Sanz, talohan'ny fivoriana tahaka ny Belzika Thomas Meunier avy amin'i Deborah namanao.
Ho an'ireo mpilalao ao Amiens, ny vadiny sy ny mpiara-mitory aminy dia hanome feo ao amin'ny tribune, voatokana ho an'ny fianakavian'ireo mpilalao, ho an'ny afisy lehibe amin'ny vanim-potoana manohitra ny ogre Parisiana. Wiki puzzle.svg Emil Krafth dia nanolotra soso-kevitra momba ny fanambadiana sy ny mpiara-dia aminy Alexis Blin dia hidera an'i Jessica ilay sipany.
Iza ireo vehivavy mpilalao ao amin'ny Amiens / PSG?
Nivoaka voalohany ity lahatsoratra ity https://www.closermag.fr/people/passion-wags-amiens-psg-decouvrez-les-femmes-des-joueurs-des-deux-equipes-en-pho-919947
Saint-Roch, hopitaly taloha: aiza ny hotely polisy?
Royal RIFT: Meghan Markle sy Kate nandray anjara tamin'ny # 039; POWER-PLAY & # 039;